नक्सा प्रकरणका चर्चित ५ नायक | Kendrabindu Nepal Online News
९ जेष्ठ २०७७, शुक्रबार १५:४७
यद्यपि भारतले पनि नेपालको नयाँ नक्सा अस्वीकार गर्दै ‘एकपक्षीय कदम ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित नभएको भनेको छ । भारतले आफ्नो सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामा आक्रमण भएको दाबी समेत गरेको छ । सीमा विवाद चुलिएसँगै ५ नेपालीको चर्चा पनि चुलिएको छ । को को हुन् सीमा विवादमा नायक बन्न सफल ५ व्यक्ति ?
नम्वर १. : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली
२०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पका बेला भारतले नाकाबन्दी ग¥यो । भूकम्पको सास्तीमा रहेका नेपालीमाथि भारतले नाकाबन्दी गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतसामू साहसपूर्ण कदम चाले । ओलीले नाकाबन्दीबाट निराश नेपालीलाई आश्वासन मात्रै दिएनन् अर्काे छिमेकी मुलुक चीनसँग पारवहन सम्झौता समेत गरे । त्यसपछि नै प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रवादीको ट्याग भिर्न सफल भएका हुन् । तर यतिबेला कोभिड १९ ले विश्व समुदाय आक्रान्त भइरहेका बेला भारतले नेपाली भूभाग मिचेर सडक सञ्जाल विस्तार ग¥यो । प्रधानमन्त्री ओली यसपटक पनि डटेर सामना गरेका छन् । यतिबेला नेपालमा कसैको सबैभन्दा बढी प्रशंसा भइरहेको छ भने उनी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै हुन् ।
६५ वर्षदेखि भारतीय पक्षले कब्जा गर्दै आएको नेपाली भूमि समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेका ओलीको यतिबेला वाहवाही बढ्दो छ । गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट नयाँ नक्सा पारित गरेका ओलीले संसदमा सम्वोधन गर्दै भारतीय रवैयाको कडा शब्दमा आलोचना गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले भारतको प्रतिक चिन्हमा भएको सत्य मेव जयते अनुसार नेपालको जित हुने बताउँदै जसरीपनि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा भूभाग फिर्ता ल्याएरै छाड्ने वाचा गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले कालापानी क्षेत्र विवादित क्षेत्र नभई भारतले कब्जामा लिएर विवादित बनाएको समेत बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय पक्षको दबाब आउनसक्ने तर्फ लक्षित गर्दै कसैको दबाबमा नपर्ने समेत बताएका थिए ।
नम्वर २ : भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्याल
गुठी विधेयक र विभिन्न अभिव्यक्तिका कारण आलोचित भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्याल पनि यतिबेला चर्चामा छिन् । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको नयाँ नक्सा जारी गरेसँगै उनको चर्चा चुलिएको हो । उनले नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउन कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताउँदै आएकी छिन् । त्यस क्षेत्रका नागरिकहरुको जनगणना, भोटर लिष्ट तथा कर तिरेको प्रमाणहरु नेपालसँग रहेको उनले बताएकी छिन् । मन्त्री अर्यालका अनुसार नेपालले थप प्रमाण जुटाउने पहल गरिरहेको छ ।
लिपुलेक क्षेत्रको सीमा समस्यालाई ध्यानमा राख्दै त्यस सम्बन्धी प्रमाण संकलनका निम्ती मन्त्री अर्यालले अथक मेहनत गरेको बताइन्छ । मिचिएको जमिन सम्बन्धी प्रष्ट प्रमाण जुटाउन उनको नेतृत्व एउटा विशेष टिमले काम गरेर फागुनमै सरकारलाई सबै डकुमेन्ट बुझाएको थियो । सीमा विवाद टुंग्याउन भारतलाई पटकपटक वार्ताका लागि आग्रह गरेपनि भारतले चासो नदिएपछि आफ्नो तर्फ यथेष्ट प्रमाण सहितको राजनैतिक नक्सा सार्वजनिक गर्नु परेको मन्त्री अर्यालको भनाई छ । यसपटक पनि भारतले सडक सञ्जाल विस्तार गरेपछि वार्ताका लागि आग्रह गरिएको थियो ।
नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रालाई परराष्टमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले कुटनीतिक नोट नै थमाएका थिए । तर भारतले नेपालको नयाँ नक्सा अस्वीकार गर्दै कोरोना भाइरसको महामारीपछि वार्तामा बस्ने आश्वासन दिएको छ । यद्यपि नेपालमा भने कोरोना महामारीकाबीच भूभाग मिच्न हुने वार्तामा बस्न किन नहुने भन्दै विरोध भइरहेको छ । नयाँ नक्सा जारी गर्ने मन्त्री अर्यालको साहसलाई धेरैले सम्मान गरेका छन् ।
नम्वर ३ : अभिनेत्री मनिषा कोइराला
सरकारले जारी गरेको नयाँ नक्साप्रति ऐक्यवद्धता जनाउँदै बलिउडमा जमेकी नेपाली कलाकार अभिनेत्री मनिषा कोइरालाले सरकारलाई धन्यवाद दिएकी थिइन् । उनले लेखेकी थिइन्, ‘हाम्रो सानो देशको आत्मसम्मान कायम राख्न सफल भएकोमा धन्यवाद । अब हामी तीन महान देशहरुबीच शान्तिपूर्ण र सम्मानजनक संवादका लागि आशावादी छौं ।’
उनको यो ट्विट यतिधेरै हिट भयो कि भारतका अधिकांश संचार माध्यमहरुमा विकाउ र भाइरल समाचार बन्यो । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपालको नयाँ नक्सा पारित भएको विषयमा गरेको ट्विटलाई मनिषाले रि–ट्वीट गरेकी थिइन् । अभिनेत्री मनिषा कोइरालाको यो ट्वीट लगत्तै उनका भारतीय प्रशंसक र भारतीय मिडियाहरुले कोइरालामाथि निकै तल्लोस्तरको टिप्पणी गर्दै उनको ट्वीटको जवाफमा कमेन्टको वर्षा बर्सिएका छन् ।
कतिले मनिषाले नेपालको समर्थन गरेको भन्दै निकै गालीसमेत गरेका छन् । मनिषामाथि भारतको नुन खाएर नेपालको गुणगान गाएको आरोप समेत लागेका छन् । कतियपयले उनको फिल्म बहिस्कार गर्नुपर्ने समेत लेखेका छन् । अभिनेत्री मनिषा कोइरालाले आफुविरुद्ध नकारात्मक टिप्पणी गर्ने भारतीयहरुलाई जवाफमा भनेकी छिन् ‘भारतलाई मैलै आफ्नो कला बेचेकी हु मेरो देश होइन ।’
त्यस्तै कोइरालाकै नामबाट सञ्चालित एक ट्वीटर ह्याण्डिलमा एक प्रयोगकर्ताले जवाफमा लेखेका छन, ‘श्रम बेच्न हुन्छ, तर स्वाभिमान बेच्नु हुँदैन।’ यति मात्र होइन चीनको इशारामा मनिषा कोइरालाले ट्वीट गरेको हो भन्नेसम्मका आरोप भारतीय मिडियाले मनिषाप्रति लगाउन भ्याएका छन् ।
भारतमा चर्काे विरोध भएपनि नेपालमा भने मनिषा निकै तारिफ भइरहेको छ । चेली होस् त मनिषा जस्तो भन्दै उनको वालमा लेख्नेहरुको लाइन लागेको छ । कतिपयले उनको फोटो र ट्विट शेयर गर्दै हौसला र धन्यवाद व्यक्त गरेका छन् । मनिषाले पनि आफ्ना शुभेच्छुकप्रति आभार र धन्यवाद व्यक्त गरिरहेकी छन् ।
नम्वर ४ : नेपाली कांग्रेसका सांसद मिनेन्द्र रिजाल
बुधवार बेलुका मनिषा कोइरालाको भाइरल समाचार हेरेर सुतेका नेपालीले बिहिवार एकाबिहानै नेपाली कांग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजालको भाइरल अन्तर्वार्ता हेर्न पाए । सांसद रिजालले केही भारतीय अतिथिसँगै भारतीय न्यूज च्यानल रिपब्लिकको बहसमा उपस्थित भएका थिए । ‘चाइना युजेज नेपाल’, अर्थात् चीनले नेपाललाई प्रयोग गर्छ नामक कार्यक्रमका लागि उपस्थित भएका उनले नेपालकाृ पक्षमा दह्रो धारणा राखेका थिए । ‘सत्तापक्षीय पत्रकार’ अर्णव गोस्वामीले सञ्चालन गरेको उक्त कार्यक्रममा रिजालले ‘तपाईंले प्रश्न गर्नु भएको हो कि कुनै मन्तव्य दिनुभएको हो? या मलाई कुनै सन्देश दिन खोज्नुभएको हो ? नेपालमा यसरी अन्तर्वार्ता लिइँदैन।’ भनेर जवाफ फर्काएका थिए ।
नेता रिजालले नेपाल र भारतबीच लामो समयदेखि सीमा विवाद चलिरहेको बताउँदै उक्त भूभाग हाम्रो भएको पुष्टि गर्न यथेष्ट प्रमाण भएको बताएका थिए । उनले वार्ताको माध्यमबाट समस्याको हल हुने बताउँदै चीनलाई जोडिरहनुको कुनै तुक नभएको बताएका थिए । राजनैतिक आस्थाका आधारमा फरक विचार भएपनि, आफु प्रतिपक्षी पार्टीको नेता भएपनि हाल सार्वजनिक राजनैतिक नक्साको सन्र्दभमा प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा रहेको बताएर सीमामा भारतिय बलमिच्याई विरुद्ध सबै नेपाली एकभएको सन्देश नेता रिजालले दिएका थिए । अन्तर्वार्तामा प्रस्तोतासँग रिजालको घम्साघम्सी बहस चलेको थियो । अन्तर्वाताका क्रममा रिजालले आफू प्रतिपक्षी दलको सांसद भएपनि राष्ट्रियताको सवालमा एकजुट रहेको बताएका थिए ।
नम्वर ५ : रवी लामिछाने
न्यूज २४ को चर्चित कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग कार्यक्रमका प्रस्तोता रवी लामिछानेको चर्चा पनि यतिबेला निकै चुलिएको छ । देशमा सीमा विवाद बहस चर्किरहँदा प्रस्तोता लामिछानेले बिहिवारको कार्यक्रमलाई विशेष कार्यक्रम घोषणा गर्दै बहस चलाएका थिए । उनले प्रधानमन्त्री ओलीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा.राजन भट्टराई, परराष्ट्रविद तथा पूर्व राजदूत प्रधुम्न बिक्रम शाह, लेखक विश्लेषक टीका ढकाल अनि भारतबाट प्रोफेसर एस.डि. मुनी र भारतीय सेनाका पूर्व जर्नेल तथा नेपाल भारत जानकार अशोक मेहता बहसमा सहभागि थिए । लामिछानेले बिहिवार दिउँसो फेसबुकमा कार्यक्रमबारे जानकारी दिँदै भारतीय मिडियाले जस्तो बकम्फुसे हल्ला नभइ तथ्य र प्रमाणका आधारमा विशेष कार्यक्रम संचालन गर्नै तयारी भइरेहेको जानकारी दिएका थिए । उनको यो स्टाटस नै ३ हजार ४ सय भन्दा बढी शेयर भएको थियो । यसको मतलव धेरै नागरिक उनको कार्यक्रमको पखाईमा थिए । राति ८ः ४५ बजेपछि कार्यक्रमको लाइभ र त्यससँग सम्बन्धित विषयवस्तुले सामाजिक सञ्जाल तातेको थियो । प्रोफेसर एस.डि. मुनीले कार्यक्रमलाई बीचमै छोडेका थिए ।
कार्यक्रम चलिरहँदा रवीको अंग्रेजी प्रस्तुतीको पनि धेरैले तारिफ गरेका थिए । कार्यक्रम सकिएपछि उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘भारतीय संचार माध्यमहरुले बिना आधार निरन्तर नेपालका विरुद्ध भ्रम छर्न थालेपछि कनिकुथी भएपनि डिबेट संचालन गरेको छु।पहिलो पटक अङ्ग्रेजीमा डिबेट संचालन गर्दा कयौं कमजोरी भएका छन्, क्षमा गर्नु होला ।’
यद्यपि यो कदमलाई धेरैले प्रशंसा मात्रै गरेका छैनन् नेपाली संचारमाध्यमको गतिलो नमुना बनेको भन्दै तिप्पणी भइरहेको छ । यतिमात्रै होइन भारतीय मिडियाले प्रशारण गरेको समाचार सामग्रीको यो कार्यक्रमको लिंक पोष्ट गर्ने अभियान समेत शुरु भएको छ । यो कार्यक्रम युट्युवमा राखिएको १० घण्टामा २ लाख ६५ हजार भन्दा बढी पटक हेरिएका छन् । सीधा कुरा जनतासँग कार्यक्रमको यो बहसले लामिछानेको हाइट थप उच्च बनाएको छ ।
nepal india, सीमा विवाद
Prevसरकारले संविधान संशोधनका लागि संसदमा प्रस्ताव दर्ता गर्ने
कोरोनाबाट मृतक महिलाका नवजात शिशुको रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि ‘डिस्चार्ज’Next
‘भारतले नेपाली भूमिमा सडक बनाएको प्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’ : परराष्ट्र मन्त्री
काभ्रेमा चवालीस वर्षपछि सीमा विवाद समाधान
नेपाल–भारत सीमा विवाद : वार्ताको मिति छिट्टै तय हुन्छ – भारत
भारतले चासो नदिएपछि पुनः मिति तोकेर पत्र पठाइएको परराष्ट्र मन्त्रीको भनाइ